Xukuumadda Somaliland Oo Qaramada Midoobay Ka Codsatay In La Dhaqaajiyo Heshiiskii Hawada Ee Turkiga Ku Dhex Maray Hargeysa Iyo Muqdisho | Salaan Media
Xukuumadda Somaliland Oo Qaramada Midoobay Ka Codsatay In La Dhaqaajiyo Heshiiskii Hawada Ee Turkiga Ku Dhex Maray Hargeysa Iyo Muqdisho
Aug 17 2013 Hargeysa(SM) – Xukuumadda Somaliland ayaa Qaramada Midoobay ka codsatay inay ka shaqeeyaan sidii loo soo wareejin lahaa maamulka hawada ee Somaliland iyo Somaliya, si loo fuliyo heshiiskii bil ka hor labada dal ku dhex maray wadanka Turkiga.
Sida ay ilo xogogaali u sheegeen Geeska Afrika, xukumadda Somaliland waxa ay dhambaal u dirtay xafiisyada Qaramada Midoobay ee Kenya, iyagoo ka codsaday inay ka shaqeeyaan si uu heshiiskii Turkigu u hirgalo inay maamulka hawada ku soo celiyaan gacanta Somaliland iyo Somalya. Weli lama hubo inay Qaramada Midoobay ka soo jawaabtay dalabka Somaliland iyo in kale.
Sida ay ilahani sheegeen xukuumadda Somaliland ayaa dhambaalkan uga jeeda dhaqaajinta heshiiskii lagu kala saxeexday wadanka Turkiga oo uu wasiir ka tirsan dawladda Somaliya dood ka keenay.
Heshiiska ayaa dhigayay inay Somaliland iyo Somaliya dib uga soo celiyaan Qaramada Midoobay maamulkii hawada islamarkaana la sameeyo guddi farsamo oo wada jir u maamusha, kuwaas oo uu xafiiskoodu noqon doono caasimadda Somaliland ee Hargeysa. Laakiin wasiirka isgaadhsiinta iyo hawada Somaliya ayaa dhawaan sheegay inaanay suurtogal ahayn in xarunta maamulka hawada laga dhigo caasimadda Hargeysa.